Ikhaya elihle ePillberg elinamakamelo okulala ama-2, iSauna neWiFi
Jabulela iholidi eliphumulele kuleli qhugwane elinethezekile e-Pillberg, elibheke Iphilisi, eduze kwaseSchwaz, endaweni ebizwa ngeSilver Region Karwendel. Ezinyangeni ezifudumele lesi sifunda sinikeza ukuhamba ngezinyawo, ukuhamba ngezinyawo okuphumuzayo nokugibela amabhayisikili. Ichibi lokubhukuda langaphandle, izitebele zamahhashi kanye nezinkundla zethenisi kunikeza izinhlobonhlobo ezinothile. Ebusika, i-Kellerjoch, intaba yasendaweni yasePill, enamakhilomitha angu-14 emithambeka kanye no-4 km we-toboggan run ihlinzeka ngokushushuluza okunobungane komndeni. Hlola umlando nezindawo ezikuzungezile ezithakazelisayo, njengokuvakashela imayini yesiliva yase-Schwaz noma i-Crystal Worlds e-Wattens, i-Achensee noma inhloko-dolobha i-Innsbruck kuzonothisa iholide lakho. (Amanzi ashisayo / ugesi, ukufudumeza / uwoyela). Uzozuza naseqhugwaneni le-sauna engadini.
Amabanga: indawo yokuhlala eseduze 300 m / ukuyothenga 6 km / Amanye amanzi noma indawo yokubhukuda (ichibi lomphakathi elingaphakathi) 6 km / indawo yokudlela 500 m / idolobha eliseduze(Schwaz) 8 km / skilift 1 km / indawo yezemidlalo yokushushuluza(Kellerjoch) 1 km / amanzi (Idamu lokubhukuda elivulekile) 6 km